China Customized Crystal pear pear Manufacturer, mpamatsy, orinasa - Quotation - MIMO FLOW CONTROL
Home > Bokotra > Bokotra Voahangy > Bokotra voahangy kristaly
Ny bokotra perla kristaly dia vita amin'ny perla fanahafana sy rafitra voaravaka diamondra kristaly, izay matetika ampiasaina amin'ny palitao lamaody avo lenta kokoa, paingotra na kiraro vehivavy avo lenta hampihetsika ny anjara asan'ny.
1. Fampidirana nyTombontsoa poara kristaly:
2. Parameteran'ny vokatraBokotra voahangy kristaly:
Kavina Crystal Voahangy miaraka amina famonoana tantely ho an'ny akanjo
Crystal, plastika ABS, vera na akorandriaka
500pcs / size / loko
Mitovy amin'ny sary, ary afaka manafatra loko namboarina
Kitapo / Akanjo fampakaram-bady / Akanjo / akanjo ba ba nataony / PartyDress
Ekeo ny endriny manokana sy ny marika manokana
Kitapo OPP na arak'izay takian'ny mpanjifa
3. Ny tombony amin'ny bokotra perla kristaly
Fitaovana tsara, rivo-piainana avo lenta, asa-tanana sarotra kokoa.
4. Torolàlana momba ny fampiasana ny vokatra an'nyBokotra voahangy kristaly:
Ny bokotra fitambaran-perila kristaly dia ny akanjo lava matevina avo lenta
Ny bokotra avo lenta dia hita taratra amin'ny fitaovany avo lenta, tsara tarehy ny maodely, tsara tarehy ny lokony, tsara ny faharetana, lafin-javatra ilaina amin'ny bokotra fitambarana bokotra perila kristaly ireo lafiny ireo.
1. Ahoana ny fomba fanaovana endrika manokana?
Azafady mba alefaso mailaka aminay ny volavolanao amin'ny endrika endrika toaJpg, AI, CDR, PDF sns. Afaka manao santionany maimaimpoana izahay amin'ny fankatoavanao.
2. Ahoana ny fomba hanafarana?
Rehefa ekena ny santionany dia alefaso aminay amin'ny alàlan'ny mailaka mailakao ny PO. Dia halefanay aminao ny faktiora hanamafisana ny baiko.
3. Inona avy ireo karazana fandoavam-bola azo ekena?
Hanomboka ny famokarana izahay rehefa vita ny fandoavam-bola feno. PayPal, TT ary West Union no ekena.
4. Mandra-pahoviana ary iza no maneho?
Ny fotoana itarihantsika dia manodidina ny 5-7 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Saingy mety maharitra elaela kokoa ny baiko marobe. Ny vokatra dia alefan'nyDoor-to-Door Express (UPS, DHL, EMS, FedEx, ary TNT) ..
5. Rahoviana no azonao ny vidiny?
Matetika izahay dia mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny nahazoanay ny fangatahana. Raha maika be ianao hahazo ny vidiny, azafady miantso anay na lazao aminay ny mailakao mba ho hitanay fa laharam-pahamehana ny fanontanianao.
Bokotra poara ABS